haween abaaraha kasoo barakacay oo lagu kufsaday Muqdisho iyo Afgooye inta u dhaxaysa
Home /Blog/haween abaaraha kasoo barakacay oo lagu kufsaday Muqdisho iyo Afgooye inta u dhaxaysa
Maryan* oo 28 jir ah ayaa sheegtay in 18-kii bishan lagu kufsaday meel u dhow deegaanka Cumar Beerre ee duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose xilli ay iyada iyo saddexdeeda carruurta ah u soo lugeynayeen Muqdisho. Hooyadan oo wadata carruur agoon ah oo aabbahood uu shuban u dhintay bishii hore ayaa abaarta uga soo barakacday deegaanka Tooratoorow oo qiyaastii 110 km galbeed uga beegan Muqdisho. Beer ay halkaas ku lahaayeen oo ay ku tiirsaneyd noloshooda ayay biyo la’aantu qallajisay, waxna kuma tacban muddo ka badan 12 bilood.
Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in xilli ku beegan siddeedda subaxnimo ay labo nin oo hubeysan ku soo baxeen xilli ay meel cidlo lugeynayeen. “Labo xabbadood ayay nagu soo rideen, dadkii aan wada soconnay oo argagaxay qofba meel buu u cararay,” ayay tiri Maryan. Waxay ahaayeen 30 qof oo u badan haween iyo carruur isku deegaan ka soo barakacay. Waxay xustay in ay awoodi waysay inay cararto maaddaama ay wadatay saddex carruur ah oo ay ka mid tahay gabar labo sano iyo bar jirta oo ay dusha ku wadday. Wiil siddeed jir ah iyo gabar lix sano jirta ayay sidoo kale lugeysiineysay.
“Markii ay i qabteen waxay igu garaaceen qoriga baadkiisa, iyaga oo igu qasbaya inaan dhulka dhigo gabadha. Markii aan ka diiday ayay xabbad waabis ah kor u rideen, waxayna ii sheegeen inay tan labaad aniga igu dhufan doonaan haddii aanan sameyn waxa ay doonayaan. Wiilkeyga ayaa ooyay naxdinta darteed oo isku dayay inuu cararo. Way soo qabteen, waxayna u dhiibeen gabadhii aan xambaarsanaa, saddexdoodiina dhinac ayay istaajiyeen, anigana geed noo dhowaa ayay igu jiiteen,” ayay tiri.
Saacad iyo bar ayay meesha ku haysteen. Waxay tilmaantay in sida qasabka ah ee ay dhulka ugu jiideen darteed uu sinta nabar ka gaaray, garabkana ay ilaa iyo hadda ka dareento xanuunka jugtii ay u geysteen. Waxay ka qaateen mobile-keedii iyo dharkii carruurteeda oo ay bac ku wadatay, kuwii ay xirneydna way jeexjeexeen.
Markii ay soo gaartay Cumar Beerre waxay la kulantay qaar ka tirsan dadkii ay wada socdeen oo siiyay dhar. Waxay sidoo kale noo sheegtay in gabar 17 jir ah oo dadkii la socday ee orday ka mid ahayd ay raggan qabsadeen oo kufsadeen. Gabadhan oo ay isku xero deggan yihiin Maryan ayaa ka gaabsatay inay nala hadasho mar aan telefoonka kula xiriirnay.
Xeradan oo lagu magacaabo Sarkuusta oo ku taalla duleedka Muqdisho ayay labo maalmood ku qaadatay inay soo gaarto. Safarkooda way hakin jireen saacadaha ay qorraxda kulushahay. Waxay halkan u yimaadeen iaygoo rajo ka qaba inay caawimaad ka helaan hay’adaha samafalka, laakiin weli ma aysan helin cid caawisa. Iyada iyo carruurteeda waxay ku tiirsan yihiin raashin bisil oo gargaar ah oo ay hal waqti siiso gabar dadka deegaanka ah.
Hay’adaha ka shaqeeya badbaabada iyo xuquuqda haweenka iyo carruurta ee kala ah SSWC iyo SWDC ayaa diiwaangeliyay 25 kiis oo kufsi ah oo haweenka barakacay loogu geystay waddada iyo xeryaha tan iyo billowgii sanadkan. Kiisaskaas ayay sheegeen in kuwooda ugu badan ay ka dhaceen xeryaha.
Aamina Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha hay’adda SSWC ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in shaqaalahooda oo xarumo ku leh xeryaha ay la kulmaan dhibbaneyaasha, sidaasna ay ku diiwaangeliyaan tacaddiyadan.
Hay’adaha ayaa siiya haweenka la kufsaday ee ay la kulmaan dawooyinka ka hortaga cudurrada ka dhasha galmada, kuwa xaaladda halista ah ku suganna waxay geeyaan isbitaallada magaalada.
Qoys reer guuraa ah oo shil ku galay duleedka Qardho